सडक-सडकमा पसल ल्याउनेलाई कडा भन्दा कडा कारवाही : नगर प्रवक्ता मर्हजन « Khabar24Nepal
सडक-सडकमा पसल ल्याउनेलाई कडा भन्दा कडा कारवाही : नगर प्रवक्ता मर्हजन
भदौ १८, काठमाडौं । खबर २४ नेपालका लाीग चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा नं.११ का वडा अध्यक्ष्र तथा नगरपालिका प्रवक्ता हरिभक्त मर्हजनसंग कोरोना संक्रमणको जटिल अवस्थामा नगरपालिकाले के कस्तो कार्यहरु गरेका छन् भन्ने विषयमा गरिएको कुराकानी-
प्रश्नः तपाई चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा नं.११ को जनप्रतिनिधि तथा नगरपालिका प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, तपाइको नगरपालिकामा कोरोना नियन्त्रण सम्वन्धमा के कस्ता कार्यहरु भइरहेको छ ?
वडाध्यक्षः धन्यवाद पत्रकार महोदय, हामीले कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न गतिविधिहरु लिएर अगाडि बढायौं । जनताको लागि सचेतना कार्यक्रमदेखि लिएर इन्स्पेक्सन, लकडाउन, जथाभावी हिड्नेलाई होल्डिङ्गमा राख्ने, माक्स, स्यानिटाइजर, पञ्जा प्रयोग गर्न लगाउने आदि कामहरु शुरुका दिनहरुमा गर्यौं । यदि दिएको मापदण्ड पुरा गरेको नपाईएमा रु १००। देखि ५००० सम्मको जरिवाना पनि गर्ने निर्णय गर्यौं । अर्कोतिर सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा सम्वन्धित अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गरि जनतालाई सु-सूचित गराउने कार्य भएको छ । हामीले निषेधाज्ञा जारी गर्दा पनि संक्रमितको संख्या वढ्दै गइरहेको छ । चन्द्रागिरी नगरपालिकामा सवभन्दा वढि कोरोना संक्रमित देखिएको वडा ११ नै हो । हामीेले हर तरहवाट के कसरी यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर प्रयास गर्दैछौं । हाम्रो नगरपालिकामा हालसम्म ९९ जना संक्रमित व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ र निको भएको करिब ४७ जना, होमक्वारेनटाइनमा ३० जना, र आयिसीयूलेसन २३ जना रहेको छ । हामीले हाम्रो नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सशस्त्र प्रहरी अस्पत्ताल, मनमोहन अस्पत्तालसँग पनि कोअर्डिनेसन गरेर संक्रमित व्यक्तिहरुको उद्धार गर्ने कार्य गरिरहेका छौं । यसको अलावा विभिन्न वडामा आइसोलेसन वार्ड, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ । आइसोलेसन दहचोकमा पनि छ । यसको साथै वडा नं. ८ मा पनि १५० वेड सम्मको आइसोलेसन वार्ड छ । अर्कोतिर हामीलाई नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रलायबाट पनि फोकल पर्सन पठाइएको छ । अव, हाम्रो लक्ष्य पिसिआर टेष्ट ५००० सम्म गर्ने लक्ष्य छ । पहिला पिसिआर टेष्ट गर्दा फ्रन्ट लाइनमा पर्ने व्यक्तिहरु स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरु, जनप्रतिनिधिहरुलगाएत अन्य फ्रन्टलाइनमा वसेर कार्य गर्ने अन्य सरोकारवाला व्यक्तिहरुलाई पिसिआर टेष्ट गर्ने योजना गरिँदैआएको र गरिएको छ । हामीले ९१ जनाको कन्ट्याक्ट टे्सिङ्ग गर्यौ । हामीले डा. सुधाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय स्वास्थ्य शाखा कमिटी गठन गरेका छौं र उक्त कमिटीमा म आफु पनि सम्मिलित छु । सो कमिटीले कोहि पनि व्यक्ति यदि अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको छ भने त्यसको पहिचान गरि नेपाल सरकारसँगसमेत समन्वय गरेर संक्रमित व्यक्तिहरुको उद्धारको कार्य गर्ने र अन्य जनताहरुलाई पनि यस रोगबाट वँच्न सजगता अप्नाउनको लागि सचेतनाको कार्यक्रम अगाडि वढाइने गरिएको छ । यसले गर्दा काममा झन सहजता र न्युनीकरण भएको महशुस गरेका छौं र यसको लागि सवै सरोकारवाला व्यक्तिहरुले आ आप्mनो तर्पmबाट चन्द्रागिरी नगरपालिकामा मात्र होइन सारा देशभरी सहजता ल्याउनुपर्दछ भन्ने हामीले सोचका छौं ।
प्रश्न : हजुर, तपाइको नगरपालिकामा उपत्यका भित्रिने नाकासँग जोडिएकोले गर्दा पनि झन खतरा बढ्ने सम्भावना छ नै, यो नाकालाई तपाईले कुनरुपमा हेर्नुभएको छ ?
उत्तरः यो काठमाण्डौ उपत्यकाको मुल प्रवेशद्धार नै हो र यसमा हामीहरु अति नै संंवेदनसिल भएनौ भने सवभन्दा खतरा हामीहरुलाई नै छ । मुलतः हामीले उपत्यका आउने हरेक सवारी साधन या मानिसहरुको लागि स्प्रे प्रयोग गर्ने, पिसिआर र आरडिटी टेष्ट गर्ने, टनेल वनाएर इन्ट्री गराउने, यदि यो दायरामा नआउने व्यक्ति या सवारी साधनलाई फर्काउने पनि गरियो । यसको लागि सुरक्षाकर्मीलगाएत अन्य सरोकारवाला व्यक्तिहरुकोसमेत सहयोग लिइएको थियो । तर यति गर्दा गर्दै पनि हरेक ठाउँहरुबाट लुकिछिपी काठमाण्डौ प्रवेश गर्नेको लर्को थियो विगतमा र हाल पनि केहि मात्रामा आएका भन्ने सुनिएको तैपनि कोशिस गर्दैछौ नियन्त्र गर्ने । यसको अलावा हामीले अति आवश्यक सामाग्री ढुवानी गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी, एम्वुलेन्स आदिलाई रोक लगाएका छैनौं । यसको लागि हामीले मात्र सम्भव छैन । यसमा सवैको पहल कदम हुनु जरुरी छ ।
प्रश्नः तपाईको नगरपालिकामा करिव डेडलाख जनसंख्या छन् भन्नुभएको छ , यी जनसंख्याको अनुपातमा यदि संक्रमितको संख्या वढ्दै गयो भने त्यसको लागि आइसोलेसन, क्वारेन्टाइनको व्यबस्था कसरी गर्नुभएको छ ?
धन्यवाद, संचारकर्मी मित्र ! यो देशको लागि मात्र नभएर विश्वको लागि नै महामारीकोरुपमा देखिएको छ । सिन्टम कसैलाई छ त कसैलाई छैन । तर पिसिआर टेष्टपछि मात्र पहिचान गरिएको छ । पहिला भारत, तेश्रो मुलुकबाट आउनेलाई मात्र देखिएको थियो तर अहिले हाम्रो समुदायमा नै देखिएकोले सचेत हुनु जरुरी छ । अहिले हामि सचेत हुनुवाहेक अरु विकल्प छैन । तैपनि हाम्रो नगरपालिकामा दुई महत्वपूर्ण अस्पत्ताल भएकोले पनि हामीलाई केहि राहत भएको छ । हामीले केहि हुनेवित्तिकै रिफर गर्छौ । यदि त्यहाँ भएन भने पाटन र किर्तिपुरमा रिफर गर्ने योजना वनाएका छोै. । यदि त्यहाँबाट पनि भएन भने हाम्रो नगरपालिका भित्र रहेका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरुमा वनाउने व्यवस्था गर्न लागेका छौं । हामी हाम्रा नगरवासीलाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा गहनरुपमा लागि परेका र्छौं । हामीलाई सवै नागरिकहरुले पनि साथ दिइरहनुभएको छ । तर पसल व्यवसायीहरुबाट साधारण स्वास्थ्य मापदण्ड पनि नअप्नाइएको हुँदा यसको लागि हामी उहाँहरुलाई यस कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दछौं ।
प्रश्नः तपाईले अघि भन्नुभयो क्वारेन्टाइन र होम क्वारेन्टाइनमा वस्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ, तर उहाँहरुको आधारभुत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि यहाँहरुले के कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ ?
उत्तर: धन्यवाद ! महत्वपूर्ण प्रश्न आएको छ । हाम्रो नगरपालिकाले अझ स्वास्थ्य शाखाले पनि जिम्मा लिएको छ । यसमा म आफै र डा. सुधाको स्वास्थ्य शाखाको टिमलगाएत अन्यले पनि जसलाई रिफर गर्नुपर्ने हो उहाहरुलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने व्यवस्था गर्ने र जो होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि दैनिकरुपमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलगाएत अन्य टिमले अवस्था बुभ्mने, ज्वरो नाप्ने, राशन सम्बन्धि व्यबस्था गर्ने, अथवा सम्बन्धित वडाबाट पनि खाद्यान्न पुर्याउने व्यबस्था गरिएको र सुरक्षाकर्मीबाट भिडभाड नियन्त्रण गर्ने व्यबस्था गरिएको छ । विगतमा पनि हामीले करिव १५ हजार व्यक्तिको लागि राहतको व्यबस्था गरिएको थियो । यो खतरा किन पनि छ भने भारतलगाएत देशका विभिन्न भागबाट काठमाण्डौ गन्तव्यस्थल भनेर आउने मानिसहरुको घुइचो हुने हुनाले पनि यो खतराको जोनमा पर्दछ र त हामी सवैजना सचेत हुनु जरुरी छ । केहि कमी कमजोरी हामीमा छ भने यसलाई सच्याएर अगाडि वढ्न चन्द्रागिरी नगरपालिका सदैव तत्पर रहने प्रण गरिन्छ ।
प्रश्नः हाम्रो च्यानल हेरिरहनुभएका समग्र श्रोता तथा दर्शकहरुलाई तपाईले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
उत्तरः पहिलो त सवभन्दा ठूलो कुरा भनेको जीवन हो । यसलाई जोगाउनको लागि हामी सवै लाग्नुपर्दछ । जीवन रहे नै पछि सवै कुरा अवश्य पाइन्छ नै । यो कुरा सवैले मनन गर्न जरुरी छ । त्यसैले त भिडभाड नहोस् भनेर हामीले विभिन्न जात्रा जस्तै इन्द्र जात्रा रोक्यौं । असोज ४ गतेवाट हुने मच्छेनारायण जात्रा रोक्ने पक्षमा छौं । किनकी जँहा भिड हुन्छ, त्यहाँ कोरोनाको खतरा त्यत्तिकै हुन्छ । जनता सवै सचेत नहुने हो भने सरकार आपैmले मात्र केहि गर्न सक्दैन । कोरोना हाम्रो पक्षमा छैन । त्यसैले प्रत्येक मानिस घरबाट अनावश्यक वाहिर ननिस्कने । यदि निस्किहालेमा सामाजिक दुरी कायम राख्ने, पञ्जा र माक्सको प्रयोग गर्ने, यदि यसो नगरेको पाइएमा रु १०० जरिवाना गर्ने र दुई वटा माक्सको व्यबस्था गर्ने निर्णय पनि हामीले गरेका छौं । यदि यसो गर्ने हो भने सम्पूर्ण नगरवासीहरुको जीवनलाई वचाउन सकिन्छ । यसमा सवै जना लाग्नुपर्दछ । हिजो २ जना हुँदा लकडाउन गरेका थियौ भने आज दुई सय भन्दा वढीको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ । यसैले सवैलाई सचेत हुनको लागि अनुरोध गर्दछु । धन्यवाद ।
आगजनी घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा एक जना पक्राउ
‘फुलबुट्टे सारी’को लेजेन्डरी भर्जनमा मदनकृष्णको स्वर (भिडियो सहित)
विदेशमा कोरोनाबाट एकसय ९१ नेपालीको मृ ‘त्यु